Guddoomiyaha Gobolka Dooro Washington NMA Council, alaab-qeybiyeyaasha aerospace ayaa ku shiraya Degmada Pierce si ay u sii wadaan shaqada fursadda cusub ee diyaaradda - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddoomiyaha Dooro Washington NMA Council, alaab-qeybiyeyaasha aerospace ayaa ku shiraya Degmada Pierce si ay u sii wadaan shaqada fursadda cusub ee diyaaradda
Guddoomiyaha Dooro Washington NMA Council, alaab-qeybiyeyaasha aerospace ayaa ku shiraya Degmada Pierce si ay u sii wadaan shaqada fursadda cusub ee diyaaradda
Waxaa laga yaabaa 22, 2018
Shabakad goboleed ka badan 600 aerospace, oo ay ku jiraan kuwa ku yaal County Pierce, waxay xiriir muhiim ah ka leeyihiin silsiladda saadka gobolka, iyadoo ku xiran maalgashiga kaabayaasha ee agagaarka Washington si ay ula kulmaan filashooyinka gaarsiinta waqtiga-dhow oo keliya.
LAKEWOOD, WA - Hogaamiyaasha dadaalka ugu jira inay ku guuleystaan ​​nashqadeynta, soo saarista iyo isku imaatinka ugu dambeeya ee diyaarada Boeing ee diyaaradeed ee cusub ee suuqa dhexe (NMA) ayaa maanta ku shiray degmada Pierce, halkaas oo u dhawaanshaha OEMs iyo jidadka waaweyn ee ganacsiga ay abuureen kala duwanaansho iyo nidaamka deegaanka ee alaab-qeybiyaha.
Wadahadalku wuxuu imanayaa maalmo kadib wararka dhaqdhaqaaqa ee xafiiska daraasadda barnaamijka ee shirkadda waxay u horseedday falanqeeyayaasha qaar inay ka fakaraan lama huraanka diyaaradda.
Jawaabta, Gov Jay Inslee wuxuu yiri “Fursadan uma qaadanayno wax iska fudud. Shaqaalaha xirfadleyda ah ee gobolka Washington iyo alaab-qeybiyeyaasha heer caalami waxay bixiyaan soo celinta ugu sareysa maalgashiga Shirkadda Boeing ee barnaamijyada cusub ee diyaaradda. Waxaan ku caddeynay 737, 747, 767, 777, 787, iyo ugu dhakhsaha badan 777X, mar labaadna waxaan u sheegi doonnaa NMA, haddii fursad naloo siiyo. ”
Labada warshad iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ee gobolka oo idil waxay ka shaqeynayaan sidii loo hubin lahaa in Washington ay diyaar u tahay haddii, iyo goorta, shirkaddu ay go'aansato inay horay u socoto.
Maamulaha Pierce County Bruce Dammeier iyo Bruce Kendall oo ka tirsan Gudiga Horumarinta Dhaqaalaha Tacoma Pierce County waxay ku biireen alaab-qeybiyeyaal maxalli ah oo ku hawlan Aerospace Futures Alliance ee NMA Task Force. Si la mid ah shirarkii hore iyo kuwa socda ee lagu qabtay gobolada Snohomish, King iyo Spokane, wadahadalada ka socda Pierce County waxay ku saleeyeen doorka lagama maarmaanka ah ee kooxaha waaweyn ee keena aerospace ee Washington ee guud ahaan tartanka gobolka.
"Aerospace waa wadaha ugu weyn ee shaqooyinka ka jira Degmada Pierce" ayuu yiri Executive Dammeier, oo wakiil ka ah Pierce County oo ka tirsan Golaha Fulinta ee NMA. Hadalkiisii ​​furitaanka, Dammeier wuxuu raaciyey “Waxaan maanta ku marti qaadnay maxaa yeelay shirkadahaadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan silsiladda wax soo saarka iyo shabakadda gobolka oo dhan 92,000 shaqaale tababaran oo aerospace ah. Si wada jir ah u noqda alaab-qeybiyeyaal waxaad siineysaa shaqooyin wanaagsan oo mushahar qoys ah oo muhiim u ah barwaaqadeena dhaqaale. ”
AFA waxay sameysay koox howleedka warshadaha si ay uga caawiso farsamada soo jeedinta "NMA Home Team".
“AFA waxay lashaqeyneysaa daneeyeyaasha aerospace guud ahaan Washington, iyagoo tilmaamaya meelaha ay warshaduhu ku qiimeyn karaan soo jeedinta gobolka iyagoo sidoo kale doonaya inay xoojiyaan silsiladda wax soo saarka. Tani waa markii ugu horreysay taariikhda Washington ee dadaal warshadeed loo qaado looguna talagalay horumarinta diyaaradda cusub, ”ayuu yiri Madaxa AFA iyo agaasimaha guud Kelly Maloney, oo wakiil ka ah warshadaha aerospace ee Golaha Fulinta ee NMA. "Waxaa jiray heer aad u wanaagsan oo kaqeybgal ah Ciidanka AFA NMA Task Force ee Degmada Pierce, oo leh uruurinta seddexaad ee ugu weyn hawada iyo ganacsiyada laxiriira Washington."
Dhaqaalaha aerospace ee gobolku aad ayuu u kala duwan yahay, wuxuu taageeraa Boeing iyo shirkadaha kale ee aerospace-ka oo leh iskudhaf, balaastik, agab casri ah, been abuur, mashiin, qalabaynta, tijaabinta, injineernimada, dhameystirka birta iyo isku imaatinka.
Sida alaab-qeybiyeyaasha kale ee ku baahsan Washington, shirkadaha Degmada Pierce waxay ku tiirsan yihiin hawada, badda, dhulka iyo tareenka si ay alaab ugu gaarsiiyaan macaamiisha adduunka. Hubinta ku tiirsanaanta isku xirnaantan ayaa ah mowduuca galabta ee Dooro Washington Council Golaha NMA.
Kaaliyaha Wasaaradda Gaadiidka ee Gobolka Washington Patty Rubstello ayaa ka warbixisay horumarka gobolka ee $ 16 bilyan Isku xidhka Washington maalgashiga kaabayaasha gaadiidka iyo sidoo kale maalgashiga $ 54 bilyan ee tareenka fudud. Hoggaamiyeyaasha ka socda daafaha gobolka ayaa sidoo kale iftiimiyay balaayiin maalgashi maxalli ah oo qorshaysan ka hor 2040.
Rukumo si aad ugu soo dirto wararka iyo cusbooneysiinta Guddoomiyaha Dooro Washington NMA Council ama nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah adoo booqanaya www.nma.choosewashington.com.
Penny Thomas, Isgaarsiinta Ganacsiga, (206) 256-6106
La wadaag Qoraalkan
← Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu ku maalgelinayaa $ 2.25 milyan shan degmo Waxaa La Shaaciyay Ku Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Caanka Ah Ee 2018 →